Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT
Location : Sinapore
Subject: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 17, 2008 12:15 am
Lets talk about the dogs..
As you all know, our NYP players were attacked brutally by TP Dogs players on their match against them.
However that was notausual fight among the players.. THat was insane!!
Tp (NO8) attacked our player(Thuya Bala) who was trying to pick him up afterarough tackle kind heartedly.TP8 punched him. Seeing his brother attacked. Thiha bala joined in the fight too.
This fight can be solved just by referee. However TP dogs from the bench ran to attack the two brothers. The brothers ran to escape the brutal attack. Our NYP girls try to protect them by blocking them from TPDOgs. However followings prove that they are Dogs...
About 20 guys..
-They attacked the girls
-They BIT the girls... OMG Only girls bite rite??? they are pussies...
-They attacked them with Metal chains..!!!
-They attacked them with soccer Boots..
-They kicked their stomach.. INHuman
-They threaten the girls over phone..
During the fight.. None of elder NYP players were hurt.. They didnt even dare touch them..
Those dogs that attacked them even knew who they attacked..
Some of them are thiha work mates!!!!
Some are friends some NYP player too..
Those attacker included dogs that are old enough to be Thiha's father...
THiha and thuya was sent to hospital after that.. swollen eyes, broken skull, bruises all over the face..
Should they deserve that?? They are just 17 years old kid!
While our girls are trying to stop the fight, TP girls were laughing and enjoying the show..
Why cant they move.. Pregnant??? Fucking prostitutes!!! Dont let NYP pple see u all at GEYLANG!!!!
Wait Wait .. After all these i made one mistake from above--
TP are not Dogs...
THey are worst than DOGs...
All mother fucking Dogs should rest in Peach..
God bless the dogs.. No NO.. TPdOGS!!!
Location : kyone tine ywar
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 17, 2008 5:52 pm
ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ NYP အသင်းက ဘယ်လိုကစားလဲဆိုတာ၊ ကျွန်တော်တို့ က ရှုံးနေလဲ ဒီစိတ်၊ နိုင်နေလဲ ဒီစိတ်၊ အားကစားစိတ်ဓာတ်ပါ။ ရှုံးမဲမဲတာ၊ နိုင်လို့ ရိုင်းပြတာမရှိပါဘူး။ Interpoly ဆိုပြီးစကန်ကတည်းက စည်းလုံးတာတွေ ညီညွတ်တာတွေဘေးမှာ ခဏထား။ အားကစားလုပ်မှာမို့ လို့အားကစားစိတ်ဓာတ်ပဲရှိတယ်။ အသင်းတိုင်းလဲ ဒီလိုပဲစိတ်ဓာတ်ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ကစားဖူးခဲ့တဲ့ အသင်းတိုင်းသိပါတယ်။ SP, NP, RP အသင်းတို့ နဲ့ နှစ်တိုင်းကစားပါတယ်။ ပြသနာအသေးအဖွဲတောင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ TP အသင်းနဲ့ မနှစ်ကလည်း ကစားခဲ့ပါတယ်။ ယခုလိုပဲ ရိုင်းပြမှုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကစားသူတွရော ပရိတ်သတ်ရော သည်းခံပြီးပွဲပြီးအောင် ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်လည်း ဒီလို အားကစားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ အသင်းနဲ့ ကန်ရပြန်တယ်။ ထပ်မံ ကြုံတွေရတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေပါ။ အားပေးသူ သက်ကြီးတွေအနေနဲ့ လည်း ကိုယ်တာဝန်ကိုယ်မယူတတ်ပါဘူး။ အငယ်တွေက ရန်မဖြစ်အောင် ထိန်းနေတာကို ကြောက်တယ်ထင်ပြီး ၀ိုင်းရိုက်တယ်။ ရန်ဖြစ်တယ် ဆိုရင်သူဖြစ်ကိုယ်ဖြစ်ပေါ့။ တစ်ဖတ်က ရန်မဖြစ်အောင်ဆွဲတာ ကို လူအုပ်အားကိုးနဲ့ ရိုက်တယ်။ တကယ်ပဲရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တခြား မပါဝင်တဲ့ TP ကျောင်းသား/သူ တွေကိုလည်း TPကိုယ်စားပြုဘောလုံးအသင်းက နာမည်ပျက်စေပါတယ်။ အရှက်ရစေပါတယ်။ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် သူချကိုယ်ချပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်ချင်းထိုးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘာမြှေ့ပာစရာမရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်း ထိုးတာတောင် တစ်ဖက်က ပြန်မခုခံရင် ရှက်မိပါတယ်။ ခုတော့ TPဘောလုံးအသင်းက တစ်ယောက်ချင်းမဟုတ် လူအုပ်အားကိုးနဲ့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းနဲ့ဝင်ဆွဲသူ မိန်းကလေးများကိုပါ အနာတရဖြစ်စေပါတယ်။ အခုလို အားကစားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ အသင်းတဲ့ ကစားရတဲ့အတွက် NYPအသင်းအနေတဲ့ ၄င်းတို့ အား ပြောမပြတတ်အောင် ရွံရှာမိပါကြောင်း။ နောင်နှစ်များတွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ အသင်းမျိုးတွင် ယခုကဲ့သို့အဆင့်အတန်းမရှိသော အားကစားသမားများနှင့် တာဝန်မသိသော၊ အချိန်မစီးသော ပရိတ်သတ်များ ပါဝင်ပါက NYP အသင်းအနေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းများနှင့် မပတ်သတ်မိအောင် ပါဝင်ကစားမည်မဟုတ်ပါ။
ယခုလို ဒဲ့ထိုးပြောတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းစရာ...သိပ်တော့မရှိပါဘူး။ အပြောမခံနိုင်ရင် ကိုယ်ရဲ့ အောက်တန်းကျမှုကို လူရှေ့သူရှေ့မှာ မပြပါနဲ့ ။ တကယ်ထိုးချင်ရင်လည်း ဘောလုံးမကစားပါနဲ့ ။ ရန်ဖြစ်လို့ ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲ။ TP=DOGs ပြောတာမှန်ပါတယ်။ တောခွေးပဲ အုပ်စုလိုက်ကိုက်တတ်တာ။ ဒီကောင်တွေက တောခွေးပဲ။ တစ်ကောင်ထဲ လွတ်နေရင် ကိန်ကိန်ကိန် အော်ပြီး ထွက်ြေ့ပးမှာ။
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 17, 2008 6:06 pm
yah..agree wif you.
they shouldn't do such things to girls.
we all know they r vry rude frm the start.
but nvr expected tat they would go tat far.
and TP gals were laughing and enjoying the show?
excuse me?i wonder if they thought tat bullying wif group is funny and enjoyable.
if they huv brains,they would see tat it wasn't fair .
and they dun huv guts to be inafight like NYP gals.
the coward TP boys and shyt-filled minded TP gals!!
TP guys,no!wait, TP gays only dare to fight wif group.
TP coward gays dun seem to think that cowardice is an embarrassing act .
ွှTP = Dogs
TP = top poly at cowardice
Last edited by witchdoll on Tue Nov 25, 2008 1:37 pm; edited3times in total
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 17, 2008 6:28 pm
မှန်ပါတယ်။ တစ်ခြားအသင်းများနဲ့ NYP ဘယ်လိုကစားတယ်ဆိုတာလည်း အားလုံးအသိပါ။ ဘောလုံးကစားတာ အားကစားပဲ။ အားကစားစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။ NYP က လျောထိုးပြီးဖျက်ထုတ်တာကို TP ဘောလုံးသမား မင်းက မိုက်လို့ လားဆိုပြီး စ ထိုးတာ က ပွဲကို ပျက်သွားအောင် လှုံ့ ဆော်တာပါ။ အားကစားစိတ်ဓာတ်မရှိတာပါ။
ရန်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး တားနေတဲ့ကြားက အုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းလုပ်တာ စည်းကမ်းမရှိတာပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အောက်တန်းကျတာပါ။ အဆင့်အတန်း မရှိတာပါ။
ဘောလုံးပွဲ လာကြည့်တာ အနာတရဖြစ်စေနိုင်သော လက်နက်ယူဆောင်လာခြင်းက ကြိုတင်ကြံစည်မှုပါ။ ဘောလုံးပွဲမှာ ချမယ်။ ရန်ရှာမယ်။ ဆော်မယ်ဆိုပြီး လာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ တော်တော် ရွံဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါအပြင် ရန်မဖြစ်တော့ရန်တား နေသော မိန်းကလေးများကို အနာတရဖြစ်စေတာ အင်မတန် မိုက်ရိုင်းတဲ့ အပြုအမူပါ။ အထက်က ပြောခဲ့ကြတဲ့ အတိုင်း ခွေးဆိုရင်တော့ ကိုက်ရမဲ့သူ၊ မကိုက်ရမဲ့သူ မခွဲနိုင်တဲ့ ဦးနှောက်မပါတဲ့၊ အုပ်စုလိုက်ကိုက်တဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (အမျိုးအစားခွဲပေးတာပါ) ဒီကိစ္စက တခြားသော TP ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့မပတ်သတ်သင့်ပါဘူး။
ပြီးတော့ကျွန်တော့ အထင်တော့ ဒီကိစ္စကို NYP အနေနဲ့ မတုံ့ပြန်သင့်ပါဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော SPCA နဲ့ ပြသနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ( Society for the Prevention of Cruelty to Animal). သူတို့ က animal ပဲကာကွယ်တာလေ။ တော်ကြာ Forum ပေါ်မှာ TP ဘောလုံးသမား တွေကို စော်ကားတယ်ဆိုပြီှး SPCAက လာရစ်နေအုံးမယ်။
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Tue Nov 18, 2008 12:16 am
ya..ya..i dun mean to the whole TP school.
just the ones who were laughing and enjoying the fight,
just the ones who were in the fight.
just the ones who encouraged the fight.
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Tue Nov 18, 2008 12:34 am
TP football player shouldn't behave like that...
how come got ppl like this....
hope this kind of thing wont happen next time...
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Tue Nov 18, 2008 1:26 am
TP Myanmar: we are symbol of UnitY...
Yes they are! Bark also bark together. Beat also beat together. Bite also bite together..
Anyway i used to havealot of respects for Tp. Their courage to fight against junta with their famous anyein shows.. Well all that just went down the drain..
They are just ignorance fucking craps who are proud of their senior hard efforts and unknowingly destroying them with their attitudes..
So sad for TP seniors.. YOu guys should be ashamed..
TP names is down the drain. Parents now knows that they beat up girls and children.
Their nonsense pride hung with their rudeness flag!
Since fighting own burmese pple make u happy.. Stop acting and u really care for burmese pple by fighting with junta with u shows...
U guys are just the same!! Killing own pple..
Got guts?? Go fight malays and chinese who insulted we burmese.
U guys are just disgrace to Burmese pple. Shame on you..
U guys might be better than burmese DOgs!!!
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Tue Nov 18, 2008 2:50 pm
TP = GAYS
I saw their behaviors with my own eyes... worthless cunts, cursing like Hell after everyone cooling down.
What's more worse than kicking & beating up girls ?
What's more GAY than bullying2to 20 ?
The only thing they have is Grandfather aged Seniors & useless players...
Boycott TP shows... dun give another Happy Ending for those MTFKs...
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Tue Nov 18, 2008 10:59 pm
mite yine htwar kyine tal....
thu toe sate ma kg ma pyit bu lar ma ti bu....
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Wed Nov 19, 2008 12:24 am
Don't talk about TP show, It's nothing to do with this. Please
အင်း... ဒီကိစ္စက TP show နဲ့ တော့ မပတ်သတ်သင့်ပါဘူး။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ TPshow ဆိုတာက TP ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတွေ အားလုံးစုစည်းပြီး လုပ်ကြတာပါ။ဒီလိုကောင်တွေ သက်သက်နဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ တစ်ခြားသော ကြိုးစားပေးဆက်လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သတ်တဲ့ TP မောင်နှမတွေကိုလေးစားတဲ့ အနေနဲ့ TP show အားလည်း၊ TPကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလည်းကောင်း ယင်းကိစ္စအတွက် ဘာမှပတ်သတ်မှုမရှိပါစေရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။http://clubnypian.forumotion.com/general-discussion-and-updated-hot-topics-f15/boycott-tp-shows-t106.htm
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Wed Nov 19, 2008 3:12 am
innnnn hote tal...
TP show nat tot ma pat tat bu...
hope NYP & TP will get well soon...
yan ma pyit kya tot yin kg mar pal...
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Wed Nov 19, 2008 8:37 pm
NYP POLY မှမိန်းကလေးများအား ရိုက်နှက်သူအချို.အား NYP Forum တွင်ဖော်ထုတ်၍ Forum ပေါ်မှ
နာနာနှက်ခြင်း၊၀ိုင်းဝန်း အားပေး ဆဲဆိုခြင်း ပြုလုပ်ကြပါ သော်လည်း၊ မိန်းကလေးများအား ဆဲဆိုသူ အချို.မှာ
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသကဲ့သို.လွတ်လတ် နေကြရာ၊ ထိုသူများကို ဖော်ထုတ်ဖွင့်ချလိုက်ရသည်။ ။
TPMM နှင့် NYPMM ဘောလုံးပွဲတွင် မိန်းကလေးများအား ဆဲဆိုခြင်းဖြင့်
ဟန်ထုတ် ရှိုးများကြသော ငပေါကြီး များမှာ အနှီဝက်ပုတ်၊ကုလားမည်း တဦး နှင့်၊ထိုသူ တို.ဖြစ်ကြသည်။
အနှီဝက်ပုတ် မှာ ဘောလုံးကွင်းအတွင်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်နေချိန်
တွင် မိန်းကလေးများ စုဝေးနေရာသ.ို ရောက်ရှိလာ၍ "စောက်ကောင်မတွေ ဆင်းခဲ၊့အကုန် သတ်ပစ်မယ်" ဟု
ြ ကိမ်းမောင်းသွား ခဲ့သည်။ ထို.အပြင် ဒုတိယနှစ် NYP မှမိန်းကလေးတယောက် အား ခေါတောကြည်. ကြည့်ရှု၍ စောက်ကောင်မ ဟု ၀က်အော်သံ ဖြင့် မြည်တွန်သွားခဲ့သည်။
ထို မိန်းကလေးအား ဆဲဆိုခြင်း ပင်လော့၊ကိုယ့်ချစ်သူ အား သတိရ ၍ တမ်းတ ခြင်းပင်လော့ ??
ထိုဝက်ပုတ် ၏ အကြောင်းအားမမှီလိုက်သော နှောင်လာနှောက်သား များသိရှိ စေရန် အနည်းငယ်
အနှီဝက်ပုတ်သည် ၎င်းပထမနှစ်တွင် TP's King ဖြစ်ချင်လွန်းသဖြင့် seniors များထံတွင်
တောင်းပန် ချဉ်းကပ် ၍နာမည်ကြီး လာသူဖြစ်သည်။
ထို.အပြင် ၎င်း၏နှံပြီစုတ်အရွယ် Tattoo အား လူတကာအား လိုက်လံပြသ ၍ attention ယူလေ့ရှိ သူ
အနှီဝက်ပုတ် နှင့်ချုစ်ြ့ကိုက်မိ သောမိန်းကလေး သည် ဤကဲ့သို.ယောကျားအာဇာနည်ရထား၍
ထိုသို.ဗြောင်ကျကျ အနိုင်ကျင့်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း အချို.သောအားနွဲ.
သည့်ယောကျားသားများသည် NYP မှ မိန်းကလေးများအား ရန်တွေ.ချင်စိတ်များ ထိန်းမနိုင်၊သိမ်းမရ နှင့်
NYP တတိယနှစ်မှ မိန်းကလေးတဦးအား ဖုန်းဆက် ရန်တွေ.ခဲ့သည်။
ဖုန်းဆက်ရာ တွင်ရုပ်ဆိုးဆိုး ကုလားပိန၊်ကုလားပု၊ကုလားမည်း တဦးသည် နောက်ကွယ်မှ တရားခံ၊ထမိန်ခြုံထဲ မှ လက်သီးပြသူများထဲမှ တယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် သိရှိရ သည်။
ထို ရုပ်ဆိုးဆိုး ကုလားပိန၊်ကုလားပု၊ကုလားမည်း သည် TP show များတွင် ပါလေရာငပိချက် ဖြစ်ကာ၊
ရုပ်ရေ ၌အကြည်တော် ၏ ၀ထ္တုများမှ ဇာတ်ဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဗေလုဝ(ဘီလူး)နှင့် နင်လားငါလား၊နင်ရောငါရော ဖြစ်နေသူဖြစ်သည်။
သို.ရာတွင်အမှန်တကယ် ဖုန်းဆက်သူမှာ ထမိန်ခြုံထဲ မှ လက်သီးပြသူများထဲမှ volunteer တယောက်ဖြစ်သည်။ထိုသူ သည် NYP တတိယနှစ်မှ မိန်းကလေးတဦးအား ဖုန်းဆက်၍ "NYP က မိန်းကလေးတွေ သည် စောက်ဆင့်(ဆင့်=အဆင့်အတန်း) မရှိကြောင်း၊ စောက်ဆင့် မရှိ၍ ကွင်းထဲ ဆင်းလာကြောင်း" ယောကျားသားပီပီ ရန်တွေ.ပြောဆိုသွား သည်။
ထိုသူ သည် မျက်လုံး ပိတ်အစ် ကာ မျက်လုံးများနှင့် အပြိုင်ကျဉ်းမြောင်းသော
ဥာဏ်ပညာရှိဟန်တူသူဖြစ်သည်။ TP မှ အကြီးအကဲ နှင့်ဆရာ၊ဆရာမ များသာ သိခဲ့ပါလျှင် နှစ်ရှည်၊လများ
Poly ပညာရေးသည် ထိုသူနှင့်တွေ.မှ အလဟဿ ဖြစ်သည်ဟု ချူံးပွဲချငိုပေလိမ်မည်။
(အိမ်း။ဆော်ရ နှက်ရတာ ကောင်းလေစွ)
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Wed Nov 19, 2008 9:57 pm
ehh.... chit_thu>>>>> how come i cant see the myanmar font that you posted?????
Location : NYP
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Thu Nov 20, 2008 1:39 pm
me 2.. cant see the Myanmar font... Chit thu yae
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Thu Nov 20, 2008 3:28 pm
i think u need to download zawgyi font..click myanmar font from below to download myanmar font..
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Thu Nov 20, 2008 8:49 pm
those MFKRs cowards have written their man-made story (which is not true) of the fight in their f**king forum..and use the rude words, but still saying the fight is jux cux of our fault. neway, show their standard. rofl. here is the link of barking.. lol... http://www.tpmyanmar.org/news.php?readmore=211 ..
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Thu Nov 20, 2008 11:32 pm
hehe... chit_thu>>>>> zawgyi font download lote htar tal.... yesterday ka ma twae ya bu.... today tot ya p....
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 24, 2008 3:45 am
I use polite words.Are they not shame to lie? Are they not shame to kick 18 years old girl?Those girls who are watching the fighting and enjoy like movie show then happy.Please don't say i am burmese girl and buddhist.If u all have kindness must try to stop the fighting.
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 24, 2008 3:52 am
If u said i am buddhist u must have kindness u must have mercy.Those who are not understand the meaning of fair and unfair u must replace with the girl who got injury kicked by tp guys.
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Mon Nov 24, 2008 2:31 pm
is there anything like animal attacks detective?if there is,may be we can report tat we've been attacked..heehee =]
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT Wed Nov 26, 2008 2:26 am
hope everybody can understand everybody...
Subject: Re: Lets Talk About the dogs ---- SUPPORT